crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Diyaarad 172 rakaab ay saarnaayeen oo arrin la yaab leh si degdeg ah dib ugu caga-dhigatay | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in La-yaabka December 29, 2016	0 458 Views
Muqdisho (Himilonews) – Diyaarad qaadkeedu dhan yahay 200 oo rakaab ah oo siday 172 rakaab kana timid New York kuna sii jeeday Fransiiska ayaa sameysay degis degdeg ah kadib markii musqusheeda la furi waayay.
U hadle u hadlay Open Skies, oo leh diyaaradda British Airways ayaa sheegay in duulimaadka diyaaradan loo weeciyay Ireland kadib markii la ogaaday in rakaabku ay dooni karaan isticmaalka musqusha, hayeeshe oqfna uusan adeegsan karin maadaama ay ciladaysan tahay.
Diyaaradda ayaa ka kacday garoon JKF iyada oo loo waqtiyeeyay inay 8:00 subaxnimo ka degto Paris, caasimadda Faransiiska.
Duulimaadka ayaa goobta loo qabtay waxay u jirtay 90 daqiiqo in ku dhow hayeeshe duuliyaha diyaaradda ayaa ku xawilay inuu ku dejiyo garoonka ku yaalla Ireland oo markaas u jirtay fogaan dhan 500 oo mile.
Si kastaba, markii diyaaradda caga dhigatay garoonka, waxaa si afrxad leh ku gacan-qaaday saraakiisha duulimaadka iyo kuwo nabad-galyada bulshada.
Duuliyaha ayaa warsaday inay hagaajiyaan musqusha diyaaradda.
Duulimaadka ayaa kadibna usii jiheystay magaalada Paris oo ay markii horaba kusii foolneyd.
Previous: Raxan Jiir ama Doolli ah oo nolosha ku cunay cunug 3 bilood jir ah
Next: Marka dhaqanku geeri u horseedo nolosha qofkiisa – aqriso qiso gaaban.
Xariif Xiriir guur usoo bandhigtay Gabar joogtay Tacsida Aabaheed.
“Jaceylkaygii hore ayaa i afduubtay oo shaabaddan ‘magaciisa’ ah igu dhigtay” – Tayane
La kulan: Ninka ‘gebi cidlo’ ah ku camiray 10,000 oo Geed-mirood ah.
Ned Norton – Sama-falaha Jir-dhiska u sameeya dadka Naafada ah.
Maqaayad qiimo dhimis u sameysa qoysaska wata ilmaha dhaqanka suuban leh
Jidka Jaalle Siyaad – Waddada ugu Ciriiriga badan Caasimadda.